Mitemo muChina inogona kukanganisa iyo App Store | IPhone nhau
China nemutemo wayo wakasimba wakanangana neinternet nzvimbo zvakare munhau, uye ndezvekuti makambani makuru ese akaparadzaniswa muAsia hofori, kutanga neFacebook, isingashande ipapo, uye ichipfuura neGoogle, iyo inofanirwa kutumira zvese ruzivo kuHurumende. Mitemo muChina inogona kukanganisa iyo App Store uye kuti Apple inochengetedza sei zvakavanzika zvedu paIOS, Chinese state agency vanoda kuti Apple itarise hunhu hwevanogadzira vanoisa paApp Store pamwe nevatengi veapp.
Chaizvoizvo, sezvaunoverenga, China haidi kungoziva nekuziva muparidzi weapplication, asi zvakare inoda kuziva mafambiro eanowana iyo application. Kuzivikanwa kwevanhu ava kunofanirwa kuve kwakabvumidzwa zvizere uye kusimbiswa kuitira kuti uenderere mberi uchiita bhizinesi muApp Store. Sekureva kwehurumende, matanho aya anotorwa kudzivirira kubiridzira izvo zvinotungamira mukubiridzira, kuendesa zvinonyadzisira uye zvemukati zvakashata kuburikidza nhare mbozha. Sekureva kweChina, izvi zvigadzirwa zvinoratidzwa kune magandanga, mbavha uye vanhu vanoita zviitiko zvisiri pamutemo.
Vanoda kuziva kuti vashoma sei kuva vakaomarara munyika umo yazvino jailbreak inobva, kubva uko kwakawanda Android zvishandiso zvine hutachiona nemarware uye chaizvo, nzvimbo yavanonyanyo kupihwa kushandisa ekubhadhara ekushandisa. Chiito chekunyepedzera chehurumende yeChinese, iyo inonyepedzera kunge iine ruzivo rwemahara nzira yakapusa nekushandisa simba reApple. Hurumende yeUnited States of America yakatomboedza kuburikidza nemumiririri wezvematongerwo enyika, uye Tim Cook akavarovera musuwo Tim Cook achaita zvakafanana neHurumende yeChina? Tiri kumirira Apple inotevera inofamba.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » dzakawanda » Mitemo muChina inogona kukanganisa iyo App Store